देवी काफ्ले | पुस २५, २०७६ शुक्रबार | 0
२०१२ डिसेम्बर १६ तारिखमा नयाँ दिल्लीको नोयडामा राति ८ बजे बसभित्र एउटा कहालीलाग्दो घटना भयो । १२ बर्षीया निर्भयालाई ६ जना राक्षसको समूहले सामूहिक बलात्कार गरेर बसबाट सडकमा फालिदिए ।
भारत पूरै रोएको थियो त्यसबेला । विद्यार्थी र आमनागरिक justice for Nirvaya लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर ज्यानको बाजी लगाउँंदै सडकमा उत्रिए । ‘अपराधीलाई तुरून्त पक्राउ गरी फाँसी दे’ भन्ने नाराले उनीहरुले आकाश घन्काए ।
१६ डिसम्बर २०१२ मा घटेको घटनाका अपराधीहरूलाई अन्ततः २२ जनवरी २०२० को बिहान ७ बजे फाँसी दिने फैसला दिल्लीको पटियाला हाइकोर्टले सुनायो ।
उक्त रात बसमा निर्भयालाई रेप गरेर फालेपछि निर्भयालाई उपचारका लागि सिङ्गापुर लगियो । निर्भयालाई सिङ्गापुर लगिए तापनि उनी राक्षसीहरूको चङ्गुलबाट उम्कन पाइनन् । सोही कारण २९ डिसम्बरमा सिङ्गापुरको हस्पिटलमै प्राण त्यागिन् । निर्भया मरे पनि भारतीयहरूको र उनका अभिभावकको लडाईं जारी थियो । भारतीय न्यायालयले सन् २००४ पछि सन् २०२० जनवरी २२ तारिखमा फाँसी दिने फैसला सुनायो ।
घटनाका अपराधीहरू बस ड्राइभर समेत ६ जना थिए । उक्त घटनाको एक अपराधी रामसिंहले जेलमै आत्महत्या गरिसकेको छ । अर्को जुवैनल कम उमेरको अर्थात नाबालक भएकोले care and protection off children home मा ३ बर्ष राखेर एउटा सिलाई मेशिन र १० हजार नगद दिएर छुट्कारा दियो राज्यसभाले ।
बाँकी रहेका ४ अपराधी विनय शर्मा (२६), पवन गुप्ता (२५), मुकेश (३२) र अक्षय कुमार (३१) का छन् । अन्ततः भारतीय न्यायालयले भारतको इतिहासमा ७ बर्ष २२ दिनपछि यी कामुक अपराधीहरूलाई फाँसीको सजाय सुनाएर निर्भयालाई न्याय दिलायो ।
ढाका (बंगलादेश) पूर्वी बंगलादेशको अदालतले एक इस्लामिक स्कूलका प्रिन्सिपलसहित १६ जनालाई बिहीबार बिहान मृत्युदण्ड सुनाएको छ । जसको विरुद्धमा यौन उत्पीडनको आरोप फिर्ता लिन अस्वीकार गरेको कारण आगो लगाइएको थियो । महिला तथा बालबालिका दमन रोकथाम न्यायाधीकरणका न्यायाधीश ममनुर रशीदले प्रिन्सिपल सिराज उद उदौला र महिलालाई मार्ने अन्यलाई अप्रिलमा मृत्युदण्ड दिने आदेश दिएका छन् । बंगलादेशको न्यायालयले पनि यस्तो द्रूत फैसला गरेको थियो ।
वास्तवमा निर्भयाको मुद्दामा न्याय ढिला भएको हो । सन्तोषको कुरा के हो भने सरकार झुक्न बाध्य भयो । अहिले दोषी पक्षका वकिल उफ्रिरहेका छन् । उनीहरु प्रश्न गरिरहेका छन्, आरोपितलाई मृत्युदण्ड दिँदैमा बलात्कार रोकिन्छ र ?
कतिपय मानवअधिकारकर्मीहरूले अहिले मानवअधिकार हनन् भएको भनेर उफ्रेका छन् । तिनलाई जवाफ के दिने ? के निर्भयालाई रेप गर्दा र उनलाई मार्दा उनको बाँच्न पाउने मानवअधिकार थिएन ?
नेपालमा बलात्कारका घटना दिनहुँ बढ्दो छ । २०७५ साल साउन १० मा कन्चनपुरकी १३ बर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । दोषी पत्ता लगाई दोषीउपर कडा सजाय होस भनेर आन्दोलन भयो । सोही आन्दोलनका क्रममा प्रहरीले १३ बर्षीय बालक सनी खुनाको निर्मम हत्या गर्यो । आन्दोलन चर्किरह्यो । यद्यपि प्रहरीप्रशासनले दोषी समात्न सकेन । त्यस इलाकाका प्रहरी प्रमुख समेत विवादमा परे । पत्रकारहरू, मिडियावालाहरूको लागि राम्रो मसला बन्यो तर निर्मलालाई न्याय दिलाउन सकेनन् । अन्ततः उनकी आमालाई १८ लाख दिएर घटना सामसुम पारियो । हिजो दोषी देखिएका प्रहरीलाई शुभकामना समेत दिन भ्याए जसको भूमिका अपराधी लुकाउन पर्याप्त देखिएको थियो ।
मानवअधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि मसला बन्यो यो काण्ड । जब न्याय दिलाउनै सक्दैनन् भने आश्वासन किन दिन्छन् नेताहरु ?
निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामात्र होइन । त्यसपछि पनि बलात्कारका श्रृंखला रोकिएको छैन । दिनहँुजसो यस्ता घटनाहरु सुन्नमा आइरहेका छन् । अब कहिलेसम्म निर्मला जस्ता पीडितहरुले न्याय पाउने आशा गर्ने ?
भारतमा पनि त बिगत १६ बर्षयता फाँसी दिइएको थिएन । तर, निर्भयाको लागि लडेकाहरूले आफ्नो अडान छोडेनन् र आज फाँसीको सजाय सुनाउन बाध्य भयो सरकार अथवा न्यायालय । यसैगरी निर्मलाको मुद्दामा पनि कोही पनि कतै पेटबिटोमा नबिकेको भए केही न केही त हुन्थ्यो । अधुरो आन्दोलनले सनी खुनाको ज्यान गयो मात्र ।
बलात्कारीहरू डराउने कोसँग ?
कमसेकम सरकारले एउटा बलात्कारीलाई कडा सजाय दिएको भए अलिकति अपराध कम हुन्थ्यो कि ? संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ भने संविधानको कितावको कुनै पानामा बलात्कारीलाई फाँसी दिइने लेखिदेऊ । त्यो बिषय सबैमा बाँड्न सकौं । बलात्कारीले एकपल्ट आफ्नो घाँटीमा फाँसीको फन्दा परेको सोचोस् । तब अवश्य ऊ पछाडि हट्ने छ ।
#सि जिनपिङ विचारधारा #भारतीय हस्तक्षेप #बलात्कार #फाँसीको फन्दा
बेलायतमा कोरोना संक्रमणका कारण २४ घण्टामा २ नर्सको मृत्यु